Fifohazam-panahy – FPMA Toulouse
« Ry malala, aza mino ny fanahy rehetra, fa izahao toetra ny fanahy, na avy amin’Andriamanitra ireny na tsia… » (1 Jaona 4 :1)
« Izao no nisehoan’ny Zanak’Andriamanitra, dia ny handrava ny asan’ny devoly » (1 Jaona 3 : 8)
Tamin’ny taona 1989, taorian’ny Fihaonambe voalohany nataon’ny Fifohazana FPMA tany Gardanne, no nijoro teto amin’ny FPMA Toulouse ny Sampana Fifohazana. Ny Mpitandrina Elysée ANDRIAMIANDRA, izay natokana ho mpiandry tamin’io fihaonambe voalohany io, no nitarika ny Fiangonana tamin’ny fampijoroana ny sampana. Mpiandry amam-polony maro no efa niomana teto amin’ny FPMA Toulouse, ka nandray fanokanana tany amin’ny Isantaona natao tany Gardanne, Troyes, La Roche sur Yon ary Besançon. Amin’izao fotoana izao dia manodidina ny 20 ny mpiandry miara-miasa amin’ny Mpitandrina amin’ny fitoriana ny Tenin’Andriamanitra, ny fitaizam-panahy, ny famangiana ary ny fanatanterahana Asa sy Fampaherezana eto amin’ny Fiangonana.
Misokatra amin’ny Fiangonana manontolo ny fotoam-pifohazana atao isaky ny zoma fahatelo amin’ny volana, izay arahana alim-bavaka ; ny fanofanana omen’ny Raiamandreny Mpitandrina sy entin’ireo mpanompon’Andriamanitra avy any ivelany ; ny fanomanana mpiandry ho an’izay nandray antso hisahana ny asa fiandrasana ny ondrin’Andriamanitra ary ny Asa sy fampaherezana atao aorian’ny fanompoam-pivavahana isaky ny alahady fahatelo amin’ny volana sy any an-tokantrano koa ho an’izay mila izany.
Ny asan’ny sampana Fifohazana dia mikendry ny fitoriana ny Filazantsaran’ny famonejan sy fanahafahana amin’ny herin’ny ratsy ary fampiorenana ho amin’ny mahazanak’Andriamanitra.
Miasa ho an’ny Fiangonana ny Fifohazana amin’ny alalan’ny fitaomana ny olona hiditra ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra, sy ho isan’ny Fiangonana, mitaiza sy mampahery azy amin’ny vavaka sy ny fizarana ny Tenin’Andriamanitra. Mpanangona ho an’Andriamanitra izy fa tsy mpampiahaka (Jaona 10 :12)
Alahady fahatelo : asa sy fampaherezana aorian’ny fanompoam-pivavahana
Zomà fahatelo : fotoam-pifohazana/ alim-bavaka
Volana Jolay : Lasim-pifohazana karakarain’ny sampana iraisana Safifo FPMA
Biraon’ny SaFifo 2022 -2023
Filoha : Brigitte RAMIANDRISOA.
Filoha mpanampy : Angelina BEHAVANA.
Mpitantsoratra : Nathie RATSITOMAHEFA
Mpitambola : Jeanne Elisabeth RABIBISOA